Love Shop Myanmar – Page 2
ချစ်သူကောင်လေးက ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေရင် ပျိုမေတို့ကို စွဲစွဲမြဲမြဲချစ်သွားမယ့်သူလို့ ယေဘုယျသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ အမှားလုပ်မိတာတွေကို မှတ်မထားတဲ့သူ သူတို့က ပျိုမေတို့ အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှတ်ထားလေ့မရှိပါဘူး။ လွယ်လွယ်ပဲ ခွင့်လွှတ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက သူတို့ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားလို့မဟုတ်ပေမယ့် ပျိုမေတို့စိတ်ဆင်းရဲမှာကို မလိုလားဘဲ ပြဿနာကို ရှည်ကြာမနေစေချင်သူမို့လို့ပါ။ သူတို့အနေနဲ့ စိတ်ဆိုး စိတ်တိုရင်တောင် ခဏတာပဲဖြစ်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုခွင့်လွှတ်လို့ အလေးမထားဘဲ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်တာမျိုးကိုတော့ သူတို့မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ၂။ ကိုယ့်ပြဿနာက သူ့ပြဿနာပါပဲ ပျိုမေတို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါ သူတို့လည်းမပျော်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ သူတို့လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့မကူညီနိုင်တဲ့ ပြဿနာနဲ့ကြုံနေရရင်တောင် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနေရသလိုတွေးခေါ်အကြံဥာဏ်ပေးပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ပါလိမ့်မယ်။
အသည်းကွဲဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူဘဲ ကွဲပြားပါတယ်။ ဒီလို ကောင်မလေးမျိုးကို ချစ်မိရင်တော့ ဒါလေးတွေ သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ၁။ သူမက အချစ်ကို နားလည်တယ်။ သူမ ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့် အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်တယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်သလို သူမကို ချစ်တဲ့ မင်းရဲ့အချစ်က စစ်မှန်ရဲ့လားဆိုတာ သိတယ်။ ၂။ အချစ်ကြောင့် ဝမ်းနည်းမှုကို ခံစားဖူးတယ်။ သူမ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူကြောင့် နှလုံးသား နာကျင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီလို သင်ခန်းစာတွေက သူမကို ပိုပြီး ခိုင်မာစေတယ်။
အခုခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေ ရှာနေကြပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူ ကောင်မလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ လက်ထပ်လိုက်ပါတော့။ ၁။ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးရင် ။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက လူတွေကိုတောင် ရူးသွပ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတာဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရထားရင် ကံကောင်းနေပြီလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ဆိုတာဟာ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မရွေးလိုက်ပါနဲ့။ သူမက မင်းကို ယုံကြည်အားကိုးပြီး မင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲ
ပျော်ရွှင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ ဒီလို အလေ့အကျင့်လေးတွေ ရှိကြပါတယ်
လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေမှာ ဒီလို အလေ့အကျင့်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပျော်ရွှင်ကြတာပေါ့။ ဘယ်လို အမူအကျင့်လေးတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်… ၁။ အိပ်ရာ တူတူ ဝင်ကြတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်သူတွေဟာ နှစ်ယောက်လုံး အိပ်ချိန်တွေ တူအောင် သက်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အိပ်ပြီလို့ ပြောပြီး ညတွေမှာ Facebook မှာ active ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ ပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂။ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတွေကို အတူတကွ ပြုလုပ်ကြတယ်။ တစ်ချို့စုံတွဲတွေက နှစ်ယောက်လုံး အကြိုက်မတူကြဘူး။ တစ်ခြားစီဘဲ ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူသန်းပေါင်းများစွာထဲမှာမှ သူတစ်ယောက်ကိုပဲ ချစ်မိတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
On February 22, 2018 February 22, 2018 By @dmin
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာ ဆန်းကြယ်တဲ့အရာပါ။ စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါတဲ့။ ၁။ တူညီမှု ။ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်မှုတူတဲ့သူ အလေ့အကျင့်တွေတူတာ စရိုက်တူတာ အတွေးအခေါ်တွေတူတဲ့သူတွေနဲ့ ချစ်ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ၂။ အပြန်အလှန် ချစ်ကြိုက်မှု ။ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်ကလဲ ပြန်ချစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ၃။ အားကျရတဲ့ အချက်တွေ ရှိလို့။ သူ့မှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရတဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးရှိတာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မြတ်နိုးရတဲ့ စရိုက်လေးတွေ ပြောပုံဆိုပုံ နေထိုင်ပုံလေးတွေရှိတာ ကိုယ်အားကျရတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေတာ ဒါတွေက တစ်စုံတစ်ယောက်ကို
အသည်းကွဲဝေဒနာကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရလား ? ဒီအချက်တွေနဲ့ ကုစားပါ။
On February 22, 2018 June 20, 2018 By @dmin
အသည်းကွဲတဲ့ဝေဒနာက ခံစားရတဲ့သူတိုင်းအတွက်တော့ အကြီးမားဆုံးနာကျင်မှုကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဝေဒနာကနေ ရုန်းထွက်ဖို့က မလွယ်ကူတာသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝေဒနာကြီးကို ကျော်လွန်ပြီး လှပတဲ့ဘဝသစ်လေးကို စဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ ၁။ နာကျင်မှုကို လက်ခံပါ။ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတော့မယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါ။ ကိုယ်က တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းအတွက် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ဝေးရတဲ့အခါ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရတာဟာ လုံးဝရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာပါ။ အသည်းကွဲတဲ့သူတွေရဲ့ ပြဿနာကတော့ သူတို့တွေဟာ ဒီနာကျင်မှုတွေထဲမှာပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ လည်ပတ်နေကြလို့ပါ။ ကြာလာတဲ့အခါ ဒီနာကျင်မှု ခံစားချက်တွေက အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂။ အလေ့အကျင့်တွေ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ex ကို သတိရစေတဲ့
LDRS ချစ်သူတွေ အနေဝေးတဲ့ ကာလကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့်သလဲ ?
On February 21, 2018 June 20, 2018 By @dmin
ချစ်သူနှစ်ဦး အနေဝေးနေပေမဲ့ အချစ်တွေ သွေးအေးမသွားအောင် ဒီအချက်လေးတွေ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ၁။ အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ စုံတွဲတော်တော်များများကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီလောက် ဆက်သွယ်နေရမှ ခိုင်မြဲမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတာက သူတို့ရဲ့ အကွာအဝေးကို နီးစေမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကတော့ အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်စေပြီး ပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ပျော်စရာလေးတွေဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ ၂။ ဝေးနေရတာကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်လိုက်ပါ။ အတူတူနေချင်တယ်ဆိုရင် ခွဲနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို အရင် ခံစားလိုက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်း ခု ဝေးနေရတာဟာ နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေ ပိုပြီးခိုင်မာစေမယ်လို့ တွေးပါ။ ဝေးနေရတဲ့အချိန်တွေဟာ
ချစ်သူရှိတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အလွတ်ကျက်ထားသင့်တဲ့ စကား (၈) ခွန်း
On May 10, 2017 July 25, 2018 By @dmin
လူတိုင်းဟာ ချီးမွမ်းပြောဆိုတာ ခံချင်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ သူဟာ သင့်ဘ၀မှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုလည်း သင်ပြောတာမျိုး ခံချင်မှာပါ။ အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို နေ့တိုင်းပြောဆိုပေးရမယ့် အရာလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်။ ဒီစကားကရိုးလွန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သင်တို့နှစ်ဦးအတွက် တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အလုပ်မသွားခင်၊ ဒါမှမဟုတ် မနက်ပိုင်း ချစ်သူဆီဖုန်းဆက်တဲ့အခါ ၊ ညဘက်အိပ်ခါနီးဖုန်းဆက်တဲ့အခါတွေမှာ ဖုန်းချခါနီးတိုင်း သင့်ကောင်မလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေး မပျက်မကွက်ပြောပါ။ ၂။ မင်းက အရမ်းကို လှပတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အမျိုးသားတွေရော၊ အမျိုးသမီးတွေပါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးကို ဘယ်လောက်လှကြောင်း၊ ဘယ်လိုကြည့်ကောင်းကြောင်းပြောပေးတာကလည်း သူ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းမွန်စေဖို့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေဖို့အတွက်